Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » YouTube-ku wuxuu ballaariyaa mamnuucidiisa DHAMMAAN waxyaabaha ka-hortagga tallaalka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Siyaasadda YouTube ee la ballaariyay ayaa lagu dabaqi doonaa “tallaallada hadda la maamulo ee la ansixiyay lana xaqiijiyay inay ammaan yihiin oo ay wax ku ool yihiin mas'uuliyiinta caafimaadka maxalliga ah iyo Ururka Caafimaadka Adduunka.
YouTube ayaa ku dhawaaqday inay mamnuuci doonto dhammaan iyo wixii ka-hortagga tallaalka ee hoos yimaada siyaasaddeeda cusub ee la ballaariyay.
Siyaasadda cusubi waxay kaloo meesha ka saari doontaa dhammaan sheegashooyinka beenta ah ee ku saabsan tallaalka joogtada ah ee cudurrada caadiga ah.
YouTube-ka ayaa sidoo kale mamnuucaya dhammaan kanaallada la xiriira dhowr qof oo caan ku ah ka-hortagga tallaalka.
YouTube, oo ah wadaagista fiidiyowga onlaynka ah ee khadka tooska ah ee Mareykanka iyo aaladda warbaahinta bulshada ee ay leedahay Google, ayaa ku dhawaaqday inay beddeleyso oo ballaarineyso siyaasaddeeda ku saabsan macluumaadka caafimaadka iyo caafimaadka waxayna mamnuuci doontaa dhammaan iyo wixii ka-hortagga tallaalka wixii hadda ka dambeeya.
Ka gudubka xayiraadda macluumaadka been abuurka ah ee ku saabsan tallaallada COVID-19, bahda warbaahinta bulshada ayaa sheegtay in siyaasadda cusub ay sidoo kale saameyn doonto waxyaabaha ay ku jiraan macluumaad khaldan oo ku saabsan tallaallada kale ee la ansixiyay.
YouTubeSiyaasadda la ballaariyay ayaa lagu dabaqi doonaa “tallaallada hadda la maamulo ee la ansixiyay lana xaqiijiyay inay ammaan yihiin oo wax ku ool yihiin mas'uuliyiinta caafimaadka deegaanka iyo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), ”Ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay shirkadda.
Siyaasadda cusubi waxay sidoo kale mamnuuci doontaa oo meesha ka saari doontaa dhammaan sheegashooyinka beenta ah ee ku saabsan tallaalada caadiga ah ee cudurrada sida jadeecada, Cagaarshowga B iyo hargabka.
Taasi waxay ku jiri doontaa kiisas ay kuwa wax qora ee wax ku dhejiya madal ay ku andacoodeen in tallaalada la ansixiyay aysan shaqaynayn, ama si khalad ah ugu xireen saamaynta caafimaad ee joogtada ah.
YouTube ayaa sheegay in nuxurka “si been abuur ah u sheegaya in tallaalada la ansixiyay ay keenaan autism, kansar ama madhalaysnimo, ama walxaha tallaallada ku jira ay la socon karaan kuwa qaata” hoos baa loo dhigi doonaa.
YouTube-ka ayaa sidoo kale mamnuucaya kanaallo la xiriira dhowr qof oo caan ku ah ka-hortagga tallaalka oo ay ka mid yihiin Robert F Kennedy Jr iyo Joseph Mercola, afhayeenka YouTube ayaa sidaas yiri.
Sida laga soo xigtay YouTube, waxay ka saartay in ka badan 130,000 fiidiyow tan iyo sanadkii hore markii lagu xadgudbay siyaasadeeda tallaalka COVID-19.
Talaadada, YouTube waxay xannibtay kanaallada afka Jarmalka ee af-hayeenka afka dawladda ee afka RT ee ku xadgudubka tilmaamaha khaldan ee COVID-19.
YouTube ayaa sheegtay inay digniin u dirtay RT ka hor inta aan la xirin labada kanaal, laakiin tallaabadaas ayaa keentay hanjabaad ka timid Moscow oo xannibtay goobta fiidiyowga.
Sida casriyeyn kasta oo muhiim ah, waxay qaadan doontaa waqti si nidaamyadeenu ay si buuxda ugu xoojiyaan fulinta, ”YouTube ayaa lagu daray bayaankeeda.
YouTube-ka maahan kan kaliya ee warbaahinta bulshada ee la halgamaya sidii loola tacaali lahaa faafitaanka fikradaha shirqoolka COVID-19 iyo macluumaad khaldan oo caafimaad guud ahaan.
Facebook-ga bishaan wuxuu bilaabay dadaal cusub oo wax looga qabanayo rabshadaha iyo kooxaha shirqoolka, isagoo ka bilaabaya hoos u dhigidda shabakad Jarmal ah oo faafineysa macluumaadka qaldan ee COVID-19.